Ndifuna ukuxoxa nge-Instagram Ngaba ikhona le ndlela? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 282
I-Instagram ihlala ivuselela ukuthanda abaxhamli bayo idibanise ukhetho lwengxoxo kwisicelo sayo, yisebenzise ngokulula, Lo msebenzi mtsha we-Instagram wenza ukuba ubenomtsalane ngakumbi kubasebenzisi, njengoko esi sicelo siphucula lonke ixesha lokuziqhelanisa neemfuno zonxibelelwano zabucala kunye nezentengiso zabasebenzisi.
Uyisebenzisa njani incoko ye-Instagram:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufaka usetyenziso I-Instagram kwifowuni yakho ephathekayo
Ngenisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha enxulumene neakhawunti yakho ye-Instagram.
Nje ukuba ukwiprofayile yakho, khetha umba wemiyalezoOko kukuthi, inqwelo moya yephepha. Ungayifumana kwicandelo eliphezulu lasekunene lescreen sakho sohlelo lokusebenza.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isithuba semiyalezo yabucala kunye nengxoxo, kukhuselekile ngokupheleleyo, unxibelelwano oluthumela ngale ndlela luya kubonakala kuphela ngabathathi-nxaxheba kwincoko.
Khangela kwaye ukhethe i umntu ofuna ukunxibelelana naye okanye uncokole.
Imisebenzi ekubonelela ngayo ngencoko ye-Instagram:
Ukuthumela nokwamkela miyalezo ngqo nomnye umntu.
Esi sicelo, ukongeza kwimiyalezo ebhaliweyo elula, ikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane Iifayile zemultimedia, ke uya kuba nethuba lokwabelana nabanye ngasese iividiyo kunye neefoto ozithandayo kakhulu.
Iifayile zemultimedia azikhawulelwanga kwezi uzigcinileyo kwifowuni yakho, nayo ungathatha iifoto ezibukhoma kwaye ke khetha naluphi na ushicilelo oluvela eludongeni lwakho, le ndlela yokugqibela inesithintelo sokubukela, oko kukuthi, kubo bobabini amaqela encoko ukuze babone umxholo ekufuneka bewulandele kwiakhawunti ukuba uyimfihlo okanye uthumele umxholo iakhawunti yoluntu.
Unako kwakhona thumela iiGifsUnokukhetha ezi zinto kwiinketho ezinikezelwa sisicelo, ezahlukileyo kwaye zonyusa ngaphezulu kwemihla ngemihla.
Los imiyalezo evakalayo zezinye zeenzuzo zale ngxoxo, uyisebenzisa ngokucinezela i-icon yemakrofoni, urekhoda irekhodi kunye nokukhululwa, iya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo.
Iifowuni zevidiyo Olunye uncedo lwesicelo, ke ukuba ufuna ukuthetha ngento eyimfihlo ngakumbi, kwaye awufuni ihlale kwingxoxo okanye kwifowuni yakho ephathekayo, olu lukhetho olusemthethweni lokunxibelelana.
Ezinye iinkcukacha kufanelekile ukuzazi:
Ukuba ngumnqweno wakho ungasusa naluphi na uhlobo lomyalezo ukuba uthumele ngengxoxo kungekuphela imiyalezo ebhaliweyo, ikwabandakanya imultimedia, iaudiyo kunye nevidiyo.
Uya kuba nethuba loku Yenza incoko ngokwezifiso zakho, Uya kuba neendlela ezahlukeneyo zoyilo onokuziqhelanisa nesihlandlo ngasinye okanye umntu.
Ekugqibeleni safika Imowudi ye-Ephemeral Le inoveli enomdla kakhulu ye-Instagram, le ndlela ikuvumela ukuba ube nencoko yabucala eya kugcinwa ngale ndlela.
Ithetha ntoni le nto? Xa usebenze ngale ndlela imiyalezo oyithumelayo iya kuthi shwaka kwincoko kwaye akukho nalinye iqela elikwincoko eliza kuba nakho ukufikelela kubo, ngendlela efanayo ukuba omnye umntu uthatha umfanekiso-skrini wencoko, isicelo siya kukwazisa.
1 Uyisebenzisa njani incoko ye-Instagram:
2 Imisebenzi ekubonelela ngayo ngencoko ye-Instagram:
3 Ezinye iinkcukacha kufanelekile ukuzazi:
Ungagcina njani izithuba kwi-Instagram?